News | god
News | Tag: god
शनिबार सुरु नगर्नुहोस् यस्ता ११ काम
शनिबार गर्न नहुने केही कामहरू !
तपाईको भाग्य कत्तिको बलियो छ ? यसरी थाहा पाउनुहोस्
केही महत्वपूर्ण वास्तु टिप्सहरु जसले तपाईंका कामलाई सफल पार्न भूमिका खेल्छन्
थाहा पाउनुहोस् मंगलबार कस्ता कामहरु गर्दा फलीफाप हुन्छ
आज मंगलबारको दिन । मान्यताका अनुसार मंगलबारको सम्बन्ध मंगल ग्रहसँग हुन्छ । यस दिनलाई हनुमान जीको दिन पनि भनिन्छ । यस दिनलाई मंगलको उर्जा पनि मानिन्नछ । संकटको समयमा मानिसको उर्जा हानी हुने गर्छ । मान्यताका अनुसार यस दिन हनुमानलाई प्रशन्न पार्ने काम गरिन्छ ।
ईश्वरको कृपा हुन घरमा यी चिज राख्नुपर्दछ !